कांग्रेस–मधेसीबीच तालमेलको तयारी, के पाक्दै छ नेपाली राजनितीमा नयाँ ? « Light Nepal
कांग्रेस–मधेसीबीच तालमेलको तयारी, के पाक्दै छ नेपाली राजनितीमा नयाँ ?
Published On : 12 January, 2018 8:02 am
काठमाडौं, २८ पुस । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा चुनावमा मधेसी दलसँग तालमेल गरेर उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गत सोमबार राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग यस विषयमा कुराकानीसमेत गरिसकेका छन् ।